www.camaloow.com - News: Barakaca fatahaada Magaalada B/weyne ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay .
December 10 2018 06:24:39
Barakaca fatahaada Magaalada B/weyne ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay .
Barakaca fatahaada Magaalada B/weyne ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay waxaana jira boqollaal qoysas ah oo wali ku dhax xayiran Fatahaadda Xad-dhaafka ah kuwaasoo aan haysan cid u maciinta madaama haweenka iyo caruurta ku adag tahay inay u bareeraan biyaha.
Xaafadaha Xaawo-Taako iyo Kooshin oo ugu sii darran marka loo eego magaalada inteeda kale ayeey meelaha qaar biyuhu ka dulboodayaan saqafka kore ee guryaha taasoo qof walba uu ka cabir qaadan karo heerka jooga biyaha ay marayaan.
Ilaa iyo hadda dowladda federaalka kama aysan hadlin marxalada adag ee soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne oo malaha waqtigan oo kale loo baahanaa in loo fidiyo gurmad deg deg ah, gaar ahaan dadka biyaha ku dhax goâ€™doonsan oo jecelaan lahaa in ay hellaan Doomo dheerya oo soo daabula iyaga iyo alaabahooda.
Biyaha fatahaada ayaa wali laheyn Wax nusqaan ah waxaana muuqata in ay isku sii ballaarinayaan Xaafaddo hor leh oo aysan wali inta la xasuusto saameyn ku yeelan laakiinse dhinaca kale hadal heynta ugu badan ayaa ah in uu jiro hoos u dhac uu sameynayo wabiga deegaannada qaar balse dadka ayaa aamisaneyn sida uu shegayaan shacabka ku dhaqan.
Haweenka Carruurta iyo Waayeelka ayaa ah kuwa ay sida gaarka u taabaneyso nolasha adag ee soo food-saartay dadka ku nool degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo gabi ahaanba la oran karo waxaa maasheeyay biyo sanadihii ugu danbeeyay aan noocooda wali horay loo arag Mgaaalada Baledweyne.
Maamulka ka taliya gobilka hiiraan ayaa waxaa uu hoostagaa doowlada federaalka oo soo magacaawday, mana la garan karo sababta ay uga aamusan tahay doowladu dhibka haysta dadka ku dhaqan magaalada beled weeyn.
· news on May 22 2016 · 0 Comments · 35526 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,903,059 unique visits